Myanmar MP4 - Home | Facebook
See more of Myanmar MP4 on Facebook
315,911 people like this
326,157 people follow this
Contact Myanmar MP4 on Messenger
အိပ်မက်ဆုံရာ - ရာသက်ပန်
E Boot Lay
♫ လေးဖြူ - စိတ်ပူတယ် ♫ Lay Phyu - Sate Pu Tal ♫ ♫ မင်း အဆင်ပြေပါ့မလား စိုးရိမ်တယ် ဒီအချိန်တစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန်လေး ချောင်မှာတစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ငိုနေအုံးမလား ♫ ♫ ချစ်သူသို့ သီချင်းပေးပို့ လိုသူများ ရှယ်နိုင်တယ်နော် (Y) <3 Myanmar MP4
♫♪ ညီမင်းခိုင် - နွယ်နီ ♫♪ ♥ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် မူရင်း CD/DVD/MP3 ဝယ်ပြီး အားပေးပါနော် ♥
♫♪ သားသား - မောင့်ချစ်သူ ♫♪ ♥ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် မူရင်း CD/DVD/MP3 ဝယ်ပြီး အားပေးပါနော် ♥
Myanmar MP4 shared Thar Nge's video.
· March 29 at 12:51am ·
Posted by Thar Nge
March 28 at 9:08am ·
ဒီမော်တော်ကား သီိချင်းလေးကလည်း ကျွန်တော်ရေးထားတာဘဲဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့ဒီသီချင်းလေးက
From Bangkok To Mandalay ထဲက ဇာတ်ဝင်တေးတပုဒ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး Bruno က အကောင်း ဆုံး...တီးခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး music arrangement တခုပါပဲ
မွန်းကြပ်တဲ့ မြို့ ပြ ဘဝတွေထဲကလွတ်မြောက်မယ့် ခရီးကလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုပါ
အ ရှုံး မပေးတဲ့ ၀ိ ညာ ဉ်
တေးရေး - စောစောကဲ
တေးဆို - Billy_လမင်းအေး
ဘီလီ ရဲ့ သီချင်းသစ်
Posted by Myanmar MP4
Myanmar MP4 sharedapost.
Min Thu Lin editedadoc in the group: Original/Copy သီချင်းမှတ်စု.
Y Wine (ဝိုင်ဝိုင်း) Original Songs
Myanmar MP4 shared their video.
ဝိုင်းစု - အချစ်ရိပ်ညနေ <3
Wine Su - A Chit Yate Nya Nay
သူငယ်ချင်းများနဲ့ share လုပ်လို့ရအောင် Facebook မှာတင်လိုက်ပါတယ်။
Myanmar MP4 added3new photos.
ဂီတ လောက သို့ တကျော့ ပြန်လာသူ မဒီ ရဲ့ ပုံရိပ်များ
ပရိသတ်တွေကတော့ သီချင်းအယ်ဘမ် သစ်ကို မျှော်လင့်လို့ နေပါပြီ <3
ပရိသတ် ကြီးဆီသို့ မဒီက သီချင်းလက်ဆောင် လေးပေးလိုက်တာကို ပြန်လည်တင်ဆက်ထားပါတယ်
မဒီတို့တွေ ဝေးကွာသွားကြတာ နှစ်ပေါင်း (၂၀) လောက် ရှိနေပါပြီ။
ခုလို ပြန်လည်တွေ့ဆုံခွင့်ရတာ မဒီ့အနေနဲ့ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာရပါတယ်။
ဒီနှစ်တွေထဲမှာ မဒီပြန်လာမယ့်အချိန်ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ စောင့်ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကိုလည်း အထူး အထူး . . ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မဒီ့အနေနဲ့ အမှတ်တရ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို လက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်။ သီချင်းဟောင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါပဲ။ ROS က ကိုဇော်လတ်ရဲ့ Acoustic နဲ့အတူ မဒီ ပြန်ဆိုထားတာပါ။
တေးရေး - ဆဲလ်စ်
ဂစ်တာ - ကိုဇော်လတ် (ROS)
ဓာတ်ပုံ - မောက်ခမ်းဝါ
Myanmar MP4 shared ဂီတအကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ's photo.
irOn crOss | Linn | စပယ်ဦးတေးသံသွင်း
Vocal recorded @ USA
ဦးသိန်းတန် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နေထိုင်စဉ်ကာလ Iron Cross မှ ပြည်တွင်းတွင်တီးခတ်၍ ဦးသိန်းတန်က အမေရိကန်တွင် သီဆို အသံသွင်းယူခဲ့သောခွေ ဖြစ်သည်။ တစ်သစ်ဆန်းတေးဟု အမည်ပေးထားသည့်အတိုင်း ရှေးသီချင်းများကို ဆန်းသစ်သီဆိုခဲ့လေသည်။ မြို့မငြိမ်းသီချင်းအများစု ဖြစ်လေသည်။ အဖုံးမပါ သီချင်းစာရင်းမပါသော တိတ်ခွေတခွေကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီမှ ရရှိနားထောင်မိပြီးနောက် ကျနော် အမြဲလိုလို နားထောင်ဖြစ်ခဲ့ပေသည်။ ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း နားကြပ်ကက်ဆက်ဖြင့် ဤအခွေကို နားဆင်ခဲ့ပေသည်။ ဦးသိန်းတန်ကို ဒီအခွေနဲ့တင် အတော်ကြွေခဲ့ရပေသည်။ သူ့အသံကြောင့် စိတ်နှလုံးကြည်မွေ့ခဲ့ရလေသည်။ သစ္စာသီချင်းတွင် ဘယ်သူ့ကိုလွမ်းရမှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့ရပေသည်။ ဘရဏီ၊ သုံးပန်လှ၊ ဇွတ်ချစ်မယ် သုံးပုဒ်ကို non-stop သီဆိုထားသည်မှာ တမျိုးချစ်စရာကောင်းနေပေသည်။ မြို့မငြိမ်းသီချင်းများ ပြန်ဆိုကြသည့်အထဲတွင် ဒီအခွေကို ကျနော့်အနေဖြင့် အကြိုက်ဆုံးပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။ နားမထောင်ရသေးဘူးဆို ကျနော်ပြောတာ လွန်မလွန်ရယ် ဦးသိန်းတန်၏ အဆိုပညာ(ဝမ်းစာ)ကို လေ့လာအကဲခတ်ကြည့်ဖို့ရယ် ဒေါင်းယူနားဆင်ကြည့်ကြပေါ့ဗျာ။
01 ဘရဏီ၊ သုံးပန်လှ၊ ဇွတ်ချစ်မယ်
Special Thanks & Credits to Ko Aung Zaw Htaik & Ko Bo Nay Lin
To Save & Enjoy >
Link#1 - https://drive.google.com/…/0B9ViPm0fkPK_bkxVaE45R3NTb…/edit…
Link#2 - http://goo.gl/E23SQc
Link#4 - https://my.pcloud.com/publink/show…
🎶 🎵ရွှေထူး ရဲ့ ချာတိတ် 🎵 🎶
♥ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် မူရင်း CD/DVD/MP3 ဝယ်ပြီး အားပေးပါနော် ♥
♫♪ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း - လေနှင်ခဲ့သူ ♫♪
ဝေလ - မချစ်ရဘူးတဲ့လား
Live ဆိုတဲ့အသံကြီးက ကောင်းလွန်းပါတယ် (y)
မကြာမီ ထွက်ရှိလာတော့မည့် လရိပ် သီချင်း MTV ကို နေတိုး နဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းက သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်
လရိပ် (La Yate) Official MV
Singer - Phyo Pyae Sone
Composer - Si Thu Min...
Album - မျှော်နိုင်သမျှ
Main Cast - Nay Toe, Wine Su Khine Thein
Director/ DP - Sai Aung Tun
Myanmar MP4 shared Myanmar Pictures's video.
နီနီခင်ဇော် - အင်းလေးမှာရွာတဲ့မိုး
Posted by Myanmar Pictures
သီချင်းလေးကိုကြိုက်လို့ အွန်းလိုင်းမှာ ရှာလို့ရသမျှ အင်းလေးဒေသရဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ ဓါတ်ပုံ ၊ ဗီဒီယိုလေးတွေကို ဖြတ်ညှပ်ကပ်ပြီး ဒီဗီဒီယိုလေးကို ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ မ...ူရင်းဓါတ်ပုံ ဗီဒီယိုနဲ့ သီချင်း ဖန်တီးသူများကိုလည်း အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာ ရှဲနိုင်ပါတယ် ✌(-‿-) ✌
Myanmar Pictures Admin Team
ရဲရင့်အောင်၊ Lil' Z ၊ ခင်လှိုင် ၊ သိန်းလင်းစိုး ၊ သားသား ၊ ထက်ယံ ၊ ညဏ်ထက်၊ ရွှေပိုးအိမ်၊ စင်သီယာ၊ ခေမာ(Supermodels) ၊
ပန်းအိ(Supermodels) နှင့် သူငယ်ချင်းများ
Cinematographer > တင်ဝင်းလှိုင်
Directed & Edited by > ထူးပိုင်ဇော်ဦး
ကြိုက်တယ်ဆို မူရင်းခွေ ကို အားပေးကြပါနော်
♫♪ ကေကေ - ပုဆိုးလေးနဲ့ကိုကို ♫♪
♫♪ လေးဖြူ - ယုံကြည်ရာ ♫♪
Pop တွေတင်တာများသွားပြီ။ Rock ကြည့်ရအောင်။
♫♪ အလင်းရောင် - မင်းနဲ့ဝေးရာ ♫♪